Maalintii xigtay marki aan ka soo baqoolnay degaanki qaadigu deganaa ayaan ku iri walaakeen, “Eebow, xaad ku keentay hadalki aad dul dhigtay sheekadii seddaxda dibi?” Waxa uu ku jawaabay, “Dibi tolkiis ka tegoo, Soo tanaada la waa’; Xaabodoon la xabaaloo, Soo xaluusha la waa’.” Waxaan ku iri, “Eebow, weli kuma fahmin.” Inta ow qoslay ayuu si kaftan ah u yiri, “Luuqluuq marow laasum laamigaas imaahaa.” Waxaan gartay in uu meel fog wax ka tibaaxaayey. Su’aal kalena kuma celin. Waa ninkaas waxa aan u fadhino fiddowgiisa. Rabbi haw raxmado.” Raggi gogosha fadhiyey ayaa mar qura yiri: “aamiin.”